Linguistics | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ọmụmụ asụsụ
Kedu ka ị si sụgharịa si Ukraine gaa Russia Gilyak?
Olee otu esi asughari gilyak site na Ukraine rue Russian? Gljaka - na ntụgharị asụsụ Russian nke "gilyaka". Nke a bụ alaka ụlọ ọrụ nwere ntụpọ dị ka Russian -ish n'okwu a "buut." Enweghị ụdị okwu a n'asụsụ Russian. Ọkọwa okwu ...
Iwu nchịkọta maka akara edemede dị na mgbagwoju anya na mgbagwoju anya?
Iwu nchịkọta maka akara edemede dị na mgbagwoju anya na mgbagwoju anya? Akwụkwọ ọ bụla SITE, ngalaba SYNTAX nke amaokwu dị mgbagwoju anya nke SSP (onyinye), ntinye nke commas. Stavitsa: 1) N'etiti akụkụ nke SSP na njikọ, onye iro na nkewa ...
esi mata ọdịiche nke ngwa ngwa nke ngwaa ahụ site na ezughị okè
otu esi amata ọdịiche nke ngwaa zuru oke site na ngwa ngwa ezughị oke N'iji okwu nhụzi zuru oke zara ajụjụ a: ihe ị ga - eme?, na onye na - ezughị okè: ihe ị ga - eme? Nanị mfe! Ụdị ngwa ngwa nke ngwaa ahụ zara ajụjụ a ga-eme, na ...
Depụta ụdị ihe nkiri na Bekee. Ka ihe ka mma. Na Bekee na nsụgharị
Depụta ụdị ihe nkiri na Bekee. Ka ihe ka mma. N'asụsụ Bekee na nsụgharị kjk, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ihe nkiri kachasị amasị gị. E nwere ụdị ụdị ihe nkiri ndị a ...
Seme na Sem Gịnị ka ọ bụ? Biko, kọwaa otu ihe atụ.
Seme na Sem Gịnị ka ọ bụ? Biko, kọwaa otu ihe atụ. A semema, ma ọ bụ semanteme (site na Grik.) M na-ahọpụta; okwu a na-eme site na nyocha na okwu ekwentịme, morpheme) bụ otu nke atụmatụ atụmatụ nke asụsụ ...
Kedu ebe dị iche na ọnọdụ ahụ?
Kedu ka ọnọdụ si dị iche na ọnọdụ? Otu ebe, ma onye ozo ma etu. 1 na-abụkarị nke m, 2 bụ ihe nke atọ. Ka anyị leba anya na yinye na azịza ya: okwu ndị a anaghị agbanwe agbanwe: Nnukwu ...
Olee iwu o ziri ezi “site na narị narị rubles asaa,” ọ bụghịkwa site na narị asaa ”?
Olee iwu o ziri ezi “site na narị narị rubles asaa,” ọ bụghịkwa site na narị asaa ”? Dochie okwu - ọzọ - jiri “ndetu” mgbe ịgaghị emehie gị! Site na ndetu asaa - site na narị asaa Ebe a, iwu nke mwepu nke ọnụọgụ na-emetụta. N'aka nri…
Kedu ihe dị mma: “ichere azịza” ma ọ bụ “ichere azịza”? Nke ahụ bụ, "Ana m eche ihe" ma ọ bụ "gịnị na-eche"?
Kedu ihe dị mma: “ichere azịza” ma ọ bụ “ichere azịza”? Nke ahụ bụ, "Ana m eche ihe" ma ọ bụ "gịnị na-eche"? Echere m na ọ nwere ike ikwere na agbanyeghị ... ngwaa a na-eche "echere" kwekọrọ na ebubo ma ọ bụ usoro ziri ezi. Ihe dị iche bụ ...
Ọ bụ eziokwu na Sanskrit yiri Russian?
Ọ bụ eziokwu na Sanskrit yiri Russian? Ọ bụ eziokwu. Ma e nwere asụsụ Europe, ọtụtụ ihe yiri Sanskrit karịa Russian. Dị ka ihe atụ, nke a, Gypsy na Ossetian. Iranian (Farsi) na Afghan (Pashto) ...
Tulle, veel - ụdị gịnị?
Tulle, veel - ụdị gịnị? Okwu ụfọdụ na-agbanwe nwoke na nwoke n’oge. Dịka ọmụmaatụ, mba. _ ndo bụbu nwoke, yabụ n'ụdị dị ntakịrị bụ _tenk_. _Coffee_ dịbu _coffee_ - nwoke…
Ajụjụ ihere n'ime
Ajuju ihere n'ime ya ka m gbalịa ịkọwara gị ihe. . Were ya na ugbu a 8: 00 awa ụtụtụ. Nke a pụtara na kpọmkwem oge 8 nke ụbọchị a agafeela. Oge awa nke itoolu amalite. Ma ugbu a ...
nyere aka chọpụta otu maka: 1 2 siri ike 3 siri ike 4 siri ike enyi
nyere aka bulie mmekorita maka: 1 siri ike akwa 2 nwoke siri ike 3 siri ike ntu oyi 4 siri ike 1) akwa siri ike, 2) onye ahụ siri ike, 3) frosty freshness, 4) ezigbo ọbụbụenyi siri ike akwa - akwa akwa siri ike onye ...
pkdkazhit yak v_dredaguvati okwu na ukr. ike
Okwu natara n’asụsụ Yukrenị; mov Nevrno viskuyuyuchiy shit * Onye odeakwụkwọ odeakwụkwọ Keruyuchy nlaazu na echiche enwere ntụkọ .... nabata BK (ka ọ dịrị ...) kwupụta otuto nke onye nsonye na rstritsya na zvdsi ịbanye mpaghara ...
Belarus, Belarus, Belarus? Olee otu o si dị mma? Ngwongwo Belarus ma obu Belarusia? Nwoke ahụ ọ bụ Belarus ka ọ bụ Belarus?
Belarus, Belarus, Belarus? Olee otu o si dị mma? Ngwongwo Belarus ma obu Belarusia? Nwoke ahụ ọ bụ Belarus ka ọ bụ Belarus? Na Russian, ọ bụghị naanị okwu Belarus ka a na-atụgharịgharị, kamakwa ọhụụ ndị sitere na ndị a ...
Kedu ka Erzyans si dị iche na mokshan? Kedu ka asụsụ dị iche? m b ụfọdụ atụnyere
Kedu ka Erzyans si dị iche na mokshan? Kedu ka asụsụ dị iche? m b ihe nkoro nke Victoria, ebe a, gbadaa ala, enwere okpokoro nke di iche na okwu: http://www.cigankin.ru/archives/581.
German Olee mgbe ha ji mee ihe na ihe di iche n'etiti nicht, kein, nichts?
German Kedu mgbe ejiri ha ma kedu ihe dị iche nicht, kein, nichts? nicht - enweghị kein - enweghị nichts - enweghị ihe ndị a bụ ụzọ iji gosipụta agọnarị. Gaghị echefula etu m si nọrọ ebe a ...
Aha Ramil nke dabara. Nke a bụ aha Tatar
Aha Ramil nke dabara. Aha Tatar aha a na-akpọ Ramil n'asụsụ Arab pụtara ihe mgbagwoju anya, ebube, ọrụ ebube. N'asụsụ Arabic, raml pụtara ịkọ ihe na ájá, ...
Kedu ihe kpatara na “abụghị onye ikpe mara” mgbe niile na-anọpụ iche, mana 'ihe aka ya dị ọcha' 'na-adịkarị n'otu!
Kedu ihe kpatara na “abụghị onye ikpe mara” mgbe niile na-anọpụ iche, mana 'ihe a na-emeghị ihe ọjọọ' na-adịkarị n'otu?! ..a “abughi” na ngwaa ka edere di iche 🙂 ma n’ozuzu, ikwesiri igha dika “obughi” edere ya na iji ya mee ya, ya na ya.
Kedu otu esi mụta Eston onwe gị? Enweghị ndị nkụzi asụsụ n'obodo, mana anyị anaghị ada mbà!
Kedu otu esi mụta Eston onwe gị? Enweghị ndị nkụzi asụsụ n'obodo, mana anyị anaghị ada mbà! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-njikọ.html http://www.eestikeel.ru/ https://sites.google.com/site/eestikeelkool/ Ihe ịga nke ọma! Estonian abụghị asụsụ siri ike ma e jiri ya tụnyere ...
Gịnị bụ “Achọrọ m!” N'asụsụ German? ka esi asụpe na gịnị ka ọ pụtara?
Gịnị bụ “Achọrọ m!” N'asụsụ German? ka esi asụpe na gịnị ka ọ pụtara? Ndi agha: ya mere na ndu Ndi mmadu - eziokwu, dikotara n’ezie, n’ezie, n’ezie Ja wohl! ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,370.